मध्यरातमा डा. केसी र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति, केसीले आज अनशन तोड्ने, यस्तो छ पाँचबुँदे सहमति – Online National Network
मध्यरातमा डा. केसी र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति, केसीले आज अनशन तोड्ने, यस्तो छ पाँचबुँदे सहमति
२९ पुष २०७४, शनिबार ०३:४१
काठमाडाै, २९ पुस — सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच शुक्रबार मध्यराति पाँचबुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा र केसीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पूर्वमहान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्राडा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले पुनः डिनको जिम्मेवारी लिन नपाउने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले डा. शशि शर्मालाई डिनमा पुनरर्बहाली गरेसँगै अग्रवाल हटेका हुन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब आइओएममा नयाँ डिन नियुक्ति हुने हो । अग्रवालले कुन अधारमा पद सम्हाल्न गए त्यो सोचनीय विषय हो । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बुँदामा शशि शर्मा पछि पुनः अग्रवाल डिन हुनु भनेको छैन ।’